ATC hazo cnc milina router Factory, Supplier - Sina ATC hazo cnc makarakara mpanamboatra
1325 spindle efatra misy tsipika ...
Dingana efatra ara-toekarena R4 wo ...
Famolavolana vaovao efatra misy ATC spindle ...
Indostrian'ny fanaka hazo: Plate vita amin'ny lalana, modely tsara, kojakoja antikony, varavarana hazo, efijery, sash crafts, vavahady miendrika, lomorom-baravarana, varavarana anatiny, tongotra amina, headboards sy ny sisa. Indostrian'ny dokam-barotra: fampahafantarana ny dokam-barotra, fanaovana fisaonana, sary sokitra sy ny fanapahana akora, fanaovana fanaovana teny kristaly, fananganana blaster ary ireo fitaovana fanaovana dokam-barotra hafa.
Ity masinina cnc hazo ity dia tena ampiasaina amin'ny fanapahana hazo sy ny sokitra. Tsy vitan'ny hoe mamokatra vokatra 2d flat ihany koa izy ireo ary afaka mamokatra vokatra 3d ihany koa. Satria ny milina fanamboarana kitay dia azo zaraina ho milina 3 axis sy 4 axis 4, afaka mameno ny filàna mpanjifa isan-karazany. Taratasy mavesatra telo metatra ny halavany, ny vy ny gantry. Noho izany dia maharitra ny masinina rehefa miasa izy. Mavesatra lanja be ny latabatra, Ity dia tsy manatsara ny fitoniana ihany fa koa mahitsy.
Orinasa mpanamboatra hazo: isan-karazany ny varavarana, Windows, kabinetra, varavarana hazo vita amin'ny rindrina, varavarana tsy misy lokony, efijery, mpanamboatra Windows Windows, fanodinana takelaka ary fanaka hafa, fanodinana hazo. Indostrian'ny dokam-barotra: marika dokambarotra, famokarana famantarana, fanapahana fitaovana ara-doka, fananganana plastika, famokarana jiro neon ary fitaovana hafa momba ny fanaovana doka.
3.6 m ny fikarakarana adidy mavesatra be dia be fandrefesana vy (ny faritra tsirairay an-tsokosoko fandriana sy ny fandriana dia nohodinina amin'ny milina fanodinana CNC avo latsaky ny 2 tapitrisa, ary ny toeran'ny lavaka eo am-pandriana dia potehin'ny angon-drakitra avo lenta. foibe fanodinana, miaraka amina milina avo kokoa. Ny milina dia maka roa HQD fihenan'ny rivotra 6KW haingam-pandeha herinaratra avo lenta vaovao, miova Changsheng spindles, ary ilay HQD tany am-boalohany miendrika boribory miloko 5 + 4 CNC (fiovam-po haingam-pandeha ambony, mitete tsy mihemotra).
Ny milina fanokafana sy milina fanokafana maharitra efatra dia natao ho an'ny mpanjifa hanatsarana ny fahombiazana. Ny loha efatra dia fehezin'ny cylinders ary azo ovaina, izay afaka mamita ny fandaharana marobe nomanin'ny mpanjifa (ny fanodinana asa dia mitaky fanovana fitaovana ao anatin'ny 2-4 fitaovana), izay mamonjy ny fanovana antsokosoko antsokosoko antsokosoko eo afovoany ary mety amin'ny vokatra misy lotra marobe amin'ny famokarana varavarana hazo, fanaka ary zavamaneno.
Tapaka, fanamafisana, fanindrohana, fanoratana (maodely tsotra). Ireo dingana efatra dia azo ampiasaina ho an'ny fananganana kabinetra sy ny fanoratana varavarana kabinetra. Mampiasa ny programa fanovana fitaovana mandeha ho azy mandroso, ny fandaharana dia mandeha ho azy ireo fepetra takiana tsy misy fidirana an-tsehatra. Spindles marobe dia miasa miaraka, fanatsarana ny fahombiazan'ny fanodinana amin'ny fomba mahomby.
Fitaovana birao, kabinetra, kabinetra, fanaka birao, fanaka mahazatra.Misy kabinetra dia mametraka ny tena amin'ny toeran'ny kabinetra hafa amin'ny toeran'ny hafa, ambry, latabatra, fanaka birao, fanaka birao, boaty hazo, kojakoja vita amin'ny lakozia hazo ary fitaovana, telo- Ny fanodinana onja onjam-peo, ny varavaran'ny kabinetra, ny varavarana hazo vita amin'ny alàlan'ny varavarana, ny varavaran'ny lamba, ny fikoronana, ny fikorohana amin'ny sary sokitra.
Ny foibe fanodinana ny fanamboarana kitay dia natao ho an'ny fenitra avo lenta, takiana avo, avo lenta amin'ny fanamafisana sy mpanjifa avo, mety amin'ny karazan-kitay matevina, board density, board composite, plastika mafy, vita amin'ny marbra voajanahary, akrika ary akora fanodinana faobe.
Ampiasaina indrindra amin'ny fanapahana vilia mavesatra, manja, fikosoham-bary, fanamaivanana sy fanodinana hafa, fanaka vita amin'ny hazo, audio, varavarana hazo matevina, varavarana fanaovana sary, varavarana sliding, kabinetra, fitaovana bodista, akorandriaka sy hazo, lalantsara vita amin'ny plastika, fiasana, tabilao , Pikantsary, grilles fikandrana, fakana sary, haingon-trano, vokatra hazo, sary sokitra 3D, ahodin-drà, famonoana vonjy maika, sns.